4 ụzọ ka ihichapụ ekpochi faịlụ l
A kpọchiri faịlụ bụ a na-echebe faịlụ nke kọmputa gọrọ ị ohere ọ na-enye ohere ọzọ ọrụ ma ọ bụ usoro iji nweta ya n'oge ọ bụla kpọmkwem oge. Ekpochi faịlụ na-eji igbochi ohere nke ndị ọrụ ndị ọzọ mgbe faịlụ a bụ na ojiji. Ọzọkwa, ụfọdụ ngwa na-eji mkpọchi faịlụ iji gbochie ọrụ si ede, ihichapụ ịgụ ma ọ bụ tampering na ẹdude ọdịnaya. Mgbe ị na-azọpụta a na-akọrọ faịlụ na ọzọ ọrụ a na-eji ya mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịnweta ozi na-agwa gị na faịlụ akpọchi.
Olee otú ego ma a faịlụ na-ekpochi ma ọ bụ
Ụfọdụ faịlụ na-ekpochi naanị maka ụfọdụ ohere. Iji mara ma ọ bụrụ na faịlụ ekpochi gbochie gị ede na ya, na-agbalị inweta ohere site na ekewetde ụfọdụ na faịlụ. A Kpọchiri Akpọchi faịlụ na-eji ihe On Error malitegharịa Next nkwupụta iji chebe onwe ya. Ọ bụrụ na gị nwara faịlụ ohere ị na-eji na-ekwu ide a chọrọ, mgbe ahụ ekpochi faịlụ ọrụ ga-alaghachi Ụgha. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị faịlụ ohere usoro na-adịghị ekwe mgbe ahụ ọrụ laghachi Ezi. Mgbe ọ bụla ị na-ezute a mkpọchi faịlụ na-agbalị iche iche uzo ozo ka lee ma ị pụrụ inweta ohere.
Olee ka ihichapụ a kpọchiri faịlụ -
Way1. Ihichapụ faịlụ site na agwụcha explorer.exe usoro
Step.1 na-akwụsị ndị explorer.exe usoro
Usoro a ukwuu n'ime egbochi ndị ọrụ si ihichapụ faịlụ na ojiji. Na-akwụsị ndị usoro, na-emeghe Task njikwa site na ịpị Control, Alt na Hichapụ igodo n'out oge. Mgbe ahụ, pịa na taabụ Filiks si menu ma họrọ onye na-agụ explorer.exe mgbe ahụ kụrụ na Ọgwụgwụ usoro bọtịnụ.
Step2. Gaa faịlụ ebe ke iwu ozugbo
Imeghe iwu ozugbo, pịa Malite mgbe ahụ Run. Na-emeghe window, ụdị cmd na pịa Run bọtịnụ. Mgbe na iwu window, na-eji cd ịkwaga faịlụ ọnọdụ. Pịnye ziri ezi direction na nke ekpochi faịlụ na-emi odude.
Step3 Hichapụ na ekpochi faịlụ
Na iwu window, Pịnye del filename. Dochie faịlụ aha na aha nke ekpochi faịlụ. The iwu kwesịrị ke obere akwụkwọ ozi.
Step4. Malitegharịa ekwentị ahụ na usoro
Mepee Task njikwa na pịa na faịlụ ahụ New ọrụ. Pịnye explore.exe si gị keyboard n'ime iwu window na họrọ OK. Ụzọ ọzọ Malitegharịa ekwentị ahụ na Explorer usoro bụ site ịgbanyụ kọmputa gị.
Way2. Hichapụ ekpochi faịlụ site na iji Windows Iweghachite njikwa
Step1. Tụgharịa na gị na kọmputa site echichi diski
Mechie gị na kọmputa na-edebe Windows reinstallation diski ka diski mbanye. Reboot kọmputa gị na-eche maka windows Malitegharịa ekwentị ya na diski kama ike mbanye.
Step2. Tinye Iweghachite njikwa mode
Ozugbo Welcome to Mbido-egosi na ihuenyo, enweta na R isi ịbanye Iweghachite njikwa mode. A ngwa bụ maka nchọpụta nsogbu na na jikọọ na Windows.
Step3. Ihichapụ ekpochi faịlụ
Ozugbo ngwa ibu, ịkwaga ọnọdụ nke ekpochi faịlụ site na iji iwu ozugbo. Pịnye del filename na-eji dochie faịlụ aha na aha nke ekpochi faịlụ. Mgbe ekpochi faịlụ anọwo na-ehichapụ, ụdị ụzọ ọpụpụ na iwu window wepuÚ usoro na reboot kọmputa gị.
Way3. Hichapụ ekpochi faịlụ site na iji Unlocker
Step1. Download Unlocker ngwa
Download Unlocker omume gị na kọmputa. Ugboro abụọ click na ntọlite ​​nke usoro ihe omume iji wụnye na soro ntuziaka nyere.
Step2 Mepee Unlocker omume
Imeghe usoro ihe omume, na-aga faịlụ ọnọdụ na Windows Explorer na nri click na faịlụ. A ọhụrụ onodu menu ogosiri ozugbo họrọ ọhụrụ Unlocker si nyere nhọrọ. The Unlocker omume ga-ya mere na-emeghe na-egosipụta ọdịnaya nke ekpochi faịlụ.
Mgbe na Unlocker ngwa, họrọ Ị kpọghee ekwt niile nhọrọ. Iwu a ga-ehichapụ niile ekpochi faịlụ site na kọmputa gị. N'ikpeazụ, mechie Unlocker na ihichapụ faịlụ aka.
Way4. Ihichapụ ekpochi faịlụ site na iji Njikwa ogbu
Download File ogbu ịba uru ma wụnye ya na kọmputa gị. Ozugbo arụnyere, na-emeghe ngwa nanị site abụọ na ịpị ma ọ bụ nri na ịpị mgbe ahụ na-ahọpụta Open.
Step2. Họrọ ndị na-esonụ
Hụ na ị na-enyere ndị na-esonụ ego igbe
m. Ị kpọghee ekwt ekpochi faịlụ ịṅụ
ii. Ị kpọghee ekwt modul
III. Chupu faịlụ si usoro
too ogologo. Hichapụ faịlụ
Kụrụ na Igbu button mgbe unu na-ahọrọ ego igbe.
Ọ bụrụ na ndị faịlụ adịghị ihichapụ họrọ Iji hichapụ on windows ihichapụ ọrụ wee pịa Igbu.
Ihe dị mkpa ka anyị na-elekọta tupu ihichapụ ekpochi faịlụ
Mgbe iji iwu ozugbo, nwere ezigbo haa kpọmkwem ọnọdụ nke faịlụ, ihe ọ bụla emehie pụrụ iduga nhichapụ nke bara uru faịlụ. Ọzọkwa mgbe eji File ogbu usoro, na-elekọta ga-iwere iji zere data ọnwụ na ọbụna usoro ọdịda.
Mgbe ị na-ihichapụ dị mkpa faịlụ carelessly n'oge ọrụ, ọ dịghị mkpa na maka egwu. Download irè data mgbake software na-ahụ ma i nwere ike weghachite ị faịlụ.
> Resource> ihichapu> 4 ụzọ ka ihichapụ ekpochi faịlụ